Izindaba - Izinto ezisetshenzisiwe sezikhuphuke kakhulu. Ngabe amanabukeni, ama-napkin wenhlanzeko nama-wipe asemanzi ngeke anyuse intengo?
Izinto zokwakha sezikhuphuke kakhulu. Ngabe amanabukeni, ama-napkin wenhlanzeko nama-wipe asemanzi ngeke anyuse intengo?
Ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, uchungechunge lwemboni yamakhemikhali lukhuphuke kakhulu, futhi amanani ezinto eziningi zokwenziwa kwamakhemikhali akhuphukile. Imboni yemikhiqizo yenhlanzeko isathwele kanzima kulo nyaka futhi ithinteka ngqo.
Abahlinzeki abaningi bezinto ezingavuthiwe nezisizayo (kufaka phakathi ama-polymers, i-spandex, izindwangu ezingezona ezelukiwe, njll.) Embonini yezokuhlanzeka bamemezele ukunyuka kwamanani. Isizathu esiyinhloko salokhu kwanda ukushoda kwezinto ezingasetshenziswanga ezikhuphukayo noma ukwanda okuqhubekayo kwamanani. Abanye baze bathi ngaphambi kokufaka i-oda kudingeka baphinde baxoxisane.
Abantu abaningi bacabangele ukuthi: Izintengo ezikhuphukayo zikhuphukile, ingabe incwadi yokwenyuka kwamanani evela kumkhiqizi womkhiqizo oqediwe izobe isemuva kakhulu?
Kukhona iqiniso kulokhu kucatshangelwa. Cabanga ngesakhiwo nezinto zokusetshenziswa zamanabukeni, napkin sanitary, nama-wipe amanzi.
Ukusula okumanzi ikakhulukazi kuyizindwangu ezingalukiwe, kuyilapho amanabukeni nama-napkin enenhlanzeko ngokuvamile enezinto ezintathu ezinkulu: ungqimba lwaphezulu, ungqimba lokumunca, nolwelansi olungezansi. Lezi zakhiwo ezinkulu zibandakanya ezinye izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali.
1. ungqimba olungaphezulu: ukwanda kwentengo yendwangu engalukanga
Indwangu engalukiwe ayisiyo nje kuphela into engaphezulu yamanabukeni nama-napkin wenhlanzeko, kepha futhi yinto esemqoka yokusulwa okumanzi. Izindwangu ezingalukiwe ezisetshenziswa emikhiqizweni elahlwayo yenhlanzeko zenziwa ngemicu yamakhemikhali kufaka phakathi i-polyester, i-polyamide, i-polytetrafluoroethylene, i-polypropylene, i-carbon fiber kanye ne-fiber fiber. Kubikwa ukuthi lezi zinto zokwenziwa kwamakhemikhali nazo ziyakhuphuka ngentengo, ngakho-ke intengo yezindwangu ezingalukiwe nakanjani izokhuphuka ngomfula wayo, futhi ngesizathu esifanayo, imikhiqizo eqediwe yemikhiqizo yenhlanzeko elahlwayo nayo izophakama.
2. Isendlalelo sokumunca: intengo yezinto ezimunca i-SAP iyenyuka
I-SAP yiyona nto eyinhloko yokwakheka kwento yokufakwa kwamanabukeni namaphinifa enhlanzeko. I-resin edonsa amanzi iMacromolecular iyi-polymer enezakhiwo ezimunca amanzi ezipholishwa ngama-monomers e-hydrophilic. I-monomer evame kakhulu futhi eshibhe kakhulu i-acrylic acid, kanti i-propylene itholakala ekuqhekekeni kukaphethiloli. Intengo kaphethiloli inyukile, kanti intengo ye-acrylic acid Ngemuva kokukhuphuka, iSAP izokwenyuka ngokwemvelo.
3. Isendlalelo esingezansi: ukwanda kwentengo ye-polyethylene eluhlaza
Isendlalelo esingezansi samanabukeni nama-napkins enhlanzeko yifilimu ehlanganisiwe, enefilimu engezansi ephefumulekayo kanye nendwangu engalukwanga. Kubikwa ukuthi ifilimu engezansi ephefumulekayo ifilimu epulasitiki ekhiqizwa nge-polyethylene. (I-PE, enye yezinhlobo eziyinhloko zepulasitiki, ihlanganiswe ngezinto ze-polyethylene Polymer.) Futhi i-ethylene, njengomkhiqizo we-petrochemical osetshenziswa kakhulu, isetshenziswa kakhulu ukwenza i-polyethylene eluhlaza epulasitiki. Uwoyela ongahluziwe ukhombisa ukuthambekela okuya phezulu, futhi izindleko zezinambuzane eziphefumulayo ezisebenzisa i-polyethylene njengezinto ezingavuthiwe zingakhuphuka njengoba intengo ye-polyethylene inyuka.
Ukunyuka kwentengo yezinto ezisetshenzisiwe kuzofaka ingcindezi ezindlekweni zabakhiqizi bemikhiqizo eseqedile. Ngaphansi kwale ngcindezi, ayikho imiphumela engaphezu kwemibili:
Okunye ukuthi abakhiqizi bomkhiqizo abaqediwe banciphisa ukuthengwa kwezinto zokusetshenziswa ukuze banciphise ingcindezi, eyehlisa amandla okukhiqiza amanabukeni;
Okunye ukuthi abakhiqizi bomkhiqizo abaqediwe babelana ngengcindezi kuma-ejenti, abathengisi nabathengi.
Kunoma ikuphi, ukwanda kwentengo ekugcineni okuthengiswayo kubonakala kungenakugwenywa.
Vele, okungenhla kumane nje kungukuqagela. Abanye abantu bacabanga ukuthi leli gagasi lokukhuphuka kwentengo aliqinile, futhi i-terminal isenayo i-inventory yokuxhasa, futhi ukwanda kwentengo kwemikhiqizo eqediwe kungenzeka kungafiki. Njengamanje, abekho abakhiqizi bemikhiqizo eseqedile abakhiphe izaziso zokukhuphula intengo.